Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Jebinta Wararka Safarka » Isbeddeleyaasha Dalxiiska Adduunka: Barnaamijka WTTC Summit ee loogu talagalay Cancun
Ka soo horjeedda dhammaan khilaafaadka Golaha Socdaalka iyo Dalxiiska Adduunka (WTTC) wuxuu mari doonaa shir madaxeedkiisa caalamiga ah ee ka dhacaya Cancun Mexico bishaan. Dhacdadani waa dejiyeyaal isbeddel ah, halkaasoo hoggaamiyeyaasha ugu sarreeya ay isu imaan doonaan markii ugu horreysay ka dib markii uu dillaacay COVID.
Golaha Socdaalka iyo Dalxiiska Adduunka (WTTC) ayaa si dhuumaaleysi ah u soo bandhigay barnaamijkooda waxqabadka leh ee ka dhacaya Shir-Madaxeedka Dalxiiska Caalamiga ee Sannadlaha ah ee ka dhacaya Cancun, Mexico, Abriil 26 iyo Abriil 27, 2021.
Shabakada Dalxiiska Adduunka xubnuhu waxay awood u yeelan doonaan inay si toos ah ula falgalaan dhacdadan isbeddel-dejinta ee toos looga daawan doono Websaydhka Shabakadda Dalxiiska Adduunka. Xubnaha WTN waxay awoodi doonaan inay ka wada hadlaan arrimaha WTN Member WhatsApp iyo Linkedin Group.
Soo ogow cidda ku sugnaan doonta Cancun, cidda hadli doonta, iyo mawduucyada la doonayo in lagu furo adduunka ilaa caadiga cusub ee socdaalka iyo dalxiiska.
Iyadoo lala kaashanayo WTTC iyo WTN, eTurboNews ayaa si toos ah ugu baahin doonta munaasabadda dhammaan dhufto ee ay ka mid yihiin eTurboNews.com iyo socodka tooska ah on April 26 iyo 27.
Juergen Steinmetz, oo ah guddoomiyaha iyo aasaasaha Shabakadda Dalxiiska Adduunka (WTN) iyo sidoo kale daabacaha eTurboNews, ayaa kaqeybgalaya shir madaxeedkan muhiimka ah ee ka dhacaya Cancun. Xubnaha WTN jir ahaan Shirwaynaha Cancun waxaa lagu casuumay in lagu daro caymiska tooska ah. Dhammaan Xubnaha WTN waxay ka faallayn karaan oo ay ka wada hadli karaan arrimaha ku saabsan xubinta keliya WhatsApp iyo Kooxda Linkedin. Si aad xubin uga noqoto WTN, booqo www.wtn.travel/register
Guji bogga soo socda si aad wax badan uga ogaato shirwaynaha soo socda ee WTTC, barnaamijka, iyo ka qaybgalayaasha.